Kooxda Chelsea oo saldhigatay kaalinta saddexaad kaddib guul ay u dhibtootay oo ay ka soo qaadatay Crystal Palace kulan la iska dhaliyey shan gool… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo gashay kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League kaddib markii guul ay ku dhibtootay ay ka soo qaadatay Crystal Palace oo ay booqatay kulan shan gool la iska dhaliyey.
Chelsea oo marti ahayd ayaa goolasha la horreysay, waxaana goolka daafurka ah u dhaliyey 6’daqiiqo Olivier Giroud, kaddib caawin uu ka helay Willian.
Daqiiqo badan kama soo wareegin markii ay Blues ballaarisay hoggaanka ciyaarta oo ay la timid goolka labaad daqiiqaddii 27’aad, waxaana dhaliyey Christian Pulisic, kaddib caawin kale oo uu ka helay Willian.
Kooxda martida loo ahaa isma dhigan, waxaa hal gool u soo celiyey 34’daqiiqo, isla qeybtii hore Wilfried Zaha oo darbo culus ka soo tuuray meel ka bannanka ka ah xerada ganaaxa.
Waxa uu ahaa mid ah goolasha ugu qurxda badnaa ee bishaas horyaalka laga dhaliyo, waxaana uu ahaa goolkii koowaad ee Zaha uu u dhaliyo Crystal Palace tartammada oo dhan sanadkan 2020.
Fursado cajiib ah oo labada dhinac ay isku heleen kaddib waxaa kulanka lagu kala nastay 2-1 ay ku gacan sarreysay Kooxda Chelsea.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa dhalinta goolasha halkooda ka sii waday, waxaana goolka saddexaad ee ciyaarta la timid 71’daqiiqo, iyadoo uu dhaliyey Tammy Abraham oo bedel ku soo galay, waxaana caawinta lahaa Ruben Loftus-Cheek oo isna dhankiisa bedel ku soo galay kulankan 3-1 ayayna ku hoggaamisay kulankan Blues.
Yeelkeede daqiiqad ayaa ka soo wareegtay markii si deg deg ah ay Palace u soo celisay goolkaas, waxaana kubbad shabaqa ku taabo ah u dhaliyey 72’daqiiqo Christian Benteke, kaddib baas hagaagsan oo uu ka helay Patrick van Aanholt, kulanka ayaana isku bedelay 3-2 weli lagu hoggaaminayey Crystal Palace.
Kulan ayaa qeybtii labaad weeraro culus la isku qaaday inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyey neefta lagu xiray Chelsea oo xitaa birta loo garaacay, haddana ugu dambeyn kulanka ayaa ku dhammaaday 3-2 ay ku soo badisay Blues.
Chelsea ayaa sidaas ugu jirta kaalinta saddexaad ee Premier League iyadoo leh 60-dhibcood, waxaana ay sugi doontaa Leicester City oo caawa la ciyaareysa Arsenal, taasoo haatan leh 58-dhibcood.